संसारका सबैभन्दा गुणकारी तरकारी स्कुस: यस्ता छन् ८ फाईदा – मिलिजुली खबर
संसारका सबैभन्दा गुणकारी तरकारी स्कुस: यस्ता छन् ८ फाईदा
स्कुस तपाई हाम्रो घर–आँगनमा सजिलै फल्छ । धेरै पनि फल्ने । यो सस्तो मात्रै होईन । स्वादिलो, सुपाच्य र स्वस्थ्यकर पनि छ । स्कुस बहुउपयोगी तरकारीको रूप चिनिन्छ । स्कुसको मुन्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्योसँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै पोषिलो छ ।
स्कुसलाई तरकारीको रूपमा उसिनेर खादा पनि हुन्छ । कतिपयले मःम बनाएर पनि खाने गरेको पाईन्छ । आफुसँग पकाउने जुन कला छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर खान सकिन्छ । कतिपयले स्कुस गाईभैसीलाई दानाको रूपमा पनि दिने गरेको पाईन्छ । तर स्कुस निकै गुणी तरकारी हो । मानव स्वास्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी खानेकुरा रूपमा मानिएको छ । स्कुस लौका प्रजातिको एक प्रकारको तरकारी हो ।
यसको उब्जनीको व्याख्या गर्ने हो भने यो विशेषतः मेक्सिको र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट उत्पत्ति भएको तरकारी हो । यसको उत्पादन अहिले त विश्वभरि नै फैलिएको छ । एन्टिअक्सिडेन्ट र विभिन्न पोषक तत्वहरू सहितको यो तरकारी स्वास्थ्यको लागि अत्यधिक लाभ प्रदान गर्ने तरकारी रहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन् ।
के छन् स्कुसका फाईदा ?
१. पोषण तत्वको धनी
स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो पोषण तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भिटामिन, खनिज र फाइबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रामको स्कुसमा क्यालोरी – ३९ प्रतिशत, कार्बाेहाइड्रेड – ९ ग्राम, प्रोटिन – २ ग्राम, भिटामिन सी –२६ प्रतिशत, कपर – १२ प्रतिशत, पोटासियम – ७ प्रतिशत, म्याग्नेसियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ । यस्तो खाले पोषण तत्वका साथसाथै स्कुसमा कम क्यालोरी, फ्याट, सोडियम र कार्बाेहाइड्रेड हुने गर्छ । त्यस्तै, शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ ।
स्कुसमा मानव शरीरलाई चाहिने एन्टिअक्सिडेन्टको प्रचुरताका कारण पनि अति गुनिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ । एन्टिअक्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरूमा पाइन्छ । जसले हाम्रो शरीरको तन्तुहरूमा हुने असरबाट बचाउँछ भने यसले शरीरभित्र हुने तनावलाई पनि कम गर्ने गर्छ ।
यिनीहरूमध्ये स्कुसमा माइरिसेटिन सबैभन्दा अधिक मात्रामा पाइन्छ । विभिन्न अनुसन्धान अनुसार मामाइरिसेटिन क्यान्सरप्रतिरोधी छ साथै यसले मधुमेह र जलन पनि कम गर्छ । स्कुस भिटामिन सीको एउटा उत्कृष्ट स्रोत हो । जुन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।
३. स्वस्थ्य मुटुका लागि
स्कुस नियमित खाने मान्छेमा मुटुरोगको जो खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल र रक्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ । जनावर र टेस्टट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले रक्तनलीहरूलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ । यसले रक्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं रक्तचाप घटाउन पनि मद्धत गर्छ ।
स्कुस फाइबरको राम्रो स्रोत हो । २०० ग्राम स्कुसमा शरीरमा चाहिने कुल फाइबरको १५ प्रतिशत आरडीआई प्राप्त गर्न सकिने बताइन्छ । फाइबर युक्त खाद्य पदार्थको उच्च सेवनले मुटु रोगको जोखिम घटाएको छ ।
४. रगतमा हुने गुलियो पदार्थको नियन्त्रण
स्कुसको घुलनशील फाइबरले शरीरको पाचन प्रणाली र कार्बाेहाइड्रेडको अवशोषणलाई सुस्त बनाउँछ । जसले रगतमा चिनीको मात्रामा कमी ल्याउँछ । स्कुसले इन्सुलिनलाई प्रभावित गरेर रगत हुने चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ ।
५. क्यान्सर कम गर्न सहयोगी
उच्च पोषणयुक्त फलफूल र तरकारीको उपभोगले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउने गर्छ । एक अध्ययनले निश्चित मात्रामा स्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौगिकहरूले क्यान्सर हुन सक्ने कोषिकामा त्यसको असर कम गर्ने गरेको देखाएको छ । यद्यपी यी नतिजाहरू पूर्ण क्यान्सर प्रतिरोधी भनेर प्रमाणित तथ्य भने होइनन् । तर यसले क्यान्सर कमगर्न सहयोग गर्छ भन्ने विषय भने विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित विषय हो ।
६. बुढेसकालमा हुने दृष्टिदोष कम
शरीरमा फ्रि रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ । जसले शरीरका विभिन्न कोषहरूमा क्षति पुर्याएर उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने दृष्टिदोष कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । यसैले, भिटामिन सी पर्याप्त पाइने यो तरकारीको नियमित सेवनले बुढेसकालको दृश्य कम गर्न मद्दत गर्छ ।
७. मिर्गाैलाको कामलाई सहज
यसको नियमित सेवनले फ्याटी लिभर डिजिज भनेको एउटा यस्तो समस्या हो । जसमा अत्यधिक बोसो कलेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । कलेजोमा जमेको धेरै बोसोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा कलेजोमा बोसो जम्ने कामलाई यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ । मु’सामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवाएको मुसामा कोलेस्ट्रोल र फ्याट्टी एसिडको मात्रा कम पाइएको थियो । तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको कलेजो स्वास्थ्यमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ ?
८. तौल स्वस्थ बनाउन
विभिन्न अध्ययनहरूले स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मोटोपनाको कुनै समस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौल घटाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घटाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ ।।यसको नियमित सेवनले पाचन स्वास्थ्यलाई सहयोग पुरूयाउँछ । तपाईंको पाचन प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहायक सिद्ध खानेकुरा हो ।
एमाले नेता लामा द्वारा भुम्लु गाउँपालिकालाई भेटघाट पोको हस्तान्तरण
पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले भने 'काभ्रेमा रसायनिक मलको अभाव हुन दिन्नौँ'